Madaxweyne Farmaajo Iyo Wafti uu Hoggaaminayo oo lagu soo dhaweeyey magaalada Khartuum ee Sudan[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo Iyo Wafti uu Hoggaaminayo oo lagu soo dhaweeyey magaalada Khartuum ee Sudan[Sawirro]
KHARTUUM- Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaaladda Khartuum ee caasimadda Suudaan, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir iyo xubno ka tirsan golayaashiisa Dowladda iyomas’uuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Suudaan.
Wafdiga Madaxweynaha ayaa socdaalkooda waxa ay qaadan doontaa muddo labo cisho ah, waxaana dhigiisa Sudan ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal.
Sidoo kale labada Mas’uul ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan dhinacyada Siyaasadda, Dhaqaalaha, Ammaanka iyo sidii Dowladda Suudaan ay kaalin uga qaadan lahayd dib u dhiska iyo xasiloonida dalka, iyagoo kala saxiixan doona heshiis ku dhisan dhinaca iskaashiga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu joogo Dalka Suudaan waxaa la filayaain uu la kulmo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi,islamarkaan uu uga warbixiyo horumarka ka jira Dalka.
Wasiirka arrimaha dibadda oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in safarka madaxweyne Farmaajo oo qaadan doona labo maalmood uu salka ku hayo sidii labada dal ay u xoojin lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan arriamah ay kamidka yihiin dhinacyada Siyaasadda,Dhaqaalaha,Amaanka iyoo dhinaca dib lomaasiyadda,iyo sidii Dowladda Suudaan ay kaalin uga qaadan lahayad dib u dhiska iyo xasiloonida dalka,iyagoo kala saxiixandoona heshiis ku dhisan dhinaca iskaashiga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu joogo Dalka Suudaan waxaa lafilayaain uu la kulmo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee kunool halkaasi,islamarkaan uu uga warbixin doono horumarka kajira Soomaaliya.